Iindidi zezitulo zegumbi lakho lokutyela | IBezzia
Iindidi ezahlukeneyo zezitulo zegumbi lakho lokutyela
UMaria vazquez | 16/07/2021 18:00 | Ifenitshala
Khetha ifayile ye- izitulo zokutyela Akusoloko kulula kuthi. Ziziqwenga eziphambili ekusebenzeni kwesi sithuba; Kuya kuba lula kuthi ukuba siza kusebenzisa esi sithuba mihla le. Kodwa, ukongeza, banempembelelo enkulu kubuhle bayo. Ukukunceda ukhethe, namhlanje besifuna ukwabelana nawe ngeentlobo ezahlukeneyo zezitulo kwigumbi lakho lokutyela.
Izitulo esabelana ngazo namhlanje zizitulo zoyilo zale mihla. Izitulo ezithandwayo kakhulu esinethemba lokuba zingakukhuthaza ukuqaphela ukuba loluphi uhlobo lwesitulo osifunayo kwigumbi lakho lokutyela. Ungoyiki ukuthandana nomnye ngenxa yodwa, namhlanje izitulo ezininzi ziphefumlelwe kwaye zilingise, eziya kukuvumela ukuba uthenge amaqhekeza afanayo ngamaxabiso atshiphu kunalawo okuqala.
Isitulo seplastiki se-Eames Yenzelwe nguCharles noRay Eames ngo-1950 kwiMyuziyam yoBugcisa bemihla ngemihla eNew York. Ngaba ifayile ye- isitulo sokuqala esenziwe ngomzi mveliso ngeplastiki kunye novulindlela wohlobo olutsha lwefanitshala oluya kuthi kamva lube ngokubanzi: isitulo esinemisebenzi emininzi iqokobhe lalo linokudityaniswa neziseko ezahlukeneyo.
Namhlanje baseseyimpumelelo kwezorhwebo. Ukhetho olukhulu lokuhombisa igumbi lokutyela, ngaphakathi nangaphandle, ngeendlela ezininzi kwintengiso. Abo bane imilenze yeplanga Okwangoku zithandwa kakhulu njengoko zisenza abahlobo abalungileyo ngeNordic trend. Beka itafile emhlophe yanamhlanje kwaye uya kufumana iseti efanelekileyo kwigumbi lokutyela langoku. Okanye ukubheja ngokudibanisa oku kunye netafile yeplanga ukuthelekisa isiko kunye nolwanamhlanje.
Uzalelwe eFrance ngo-1927, isitulo se-Tolix sihlala sesinye sezona zinto ziceliweyo. Isinyithi kunye nokuxinanaEsi sihlalo senziwe nguTolix, inkampani eyasekwa ngusomashishini waseFrance uXavier Pauchard ukuvelisa ifenitshala yentsimbi esebenzayo kunye nomgangatho, usindile unanamhla kwiinguqulelo ezininzi.
Yenziwe ngentsimbi ebunjiweyo, eyenziwe nge-mat okanye i-gloss, eyenziwe ngemibala ... Dibanisa izitulo zeTolix kunye neetafile ezibonakala ngathi zirustic ukuhombisa amagumbi okutyela e-rustic okanye ezentengiso, kunye nele mihla kunye nelincinci ukujonga isitayile se-avant-garde ngakumbi. Gcwalisa iseti nge izibane ezinkulu ezijingayo kwaye uya kufezekisa ikona yokutya imagazini.
Usihlalo we-Y, okwabizwa ngokuba nguSihlalo weWishbone, yenye yezona zixhobo ziyaziwa nguWegner kwaye yenye yeentlobo zezitulo esicinga ukuba ziphumelele nakweliphi na igumbi lokutyela. Idalwe ngo-1949, esi sihlalo aqingqwe ngomthi kunye isihlalo intambo, ine-backrest eyahlukileyo emise uY enika igama layo. Ngaphandle kwembonakalo yayo encinci, kufuneka isakhono esikhulu sokwenza ngesandla.
Isitulo esihle nesintofontofo siyafumaneka kwi iinkuni ezahlukeneyo, ukugqitywa kunye nemibala. Kwinguqulelo yayo yesiqhelo, ingena ngokugqibeleleyo kuzo zombini iindawo zeklasikhi kunye ne-avant-garde, ehonjiswe ngombala omhlophe, enika ubushushu obukhulu. Ngelixa kumnyama kwaye kungqonge itafile yamatye yanamhlanje, kufanelekile ukuphucula ubungangamsha kunye nokuphakama kwegumbi lokutyela.
Usihlalo wePanton yenye ye Iimpawu zePop Art. Eyilwe ngumzobi uVerner Parton ngo-1960, yaqala ukwenziwa kuthotho ukusukela ngo-1967 ngokusebenzisana noVitra. Yi isitulo esinye se-ergonomic, Yenziwe ngeplastikhi kuphela. Isiqwenga ekuya kuba nesibindi kuphela
Usihlalo wePanton ufumaneka kwimibala eyahlukeneyo. Ngaphandle kokuthetha, bazisa ifayile ye- ukuchukumisa okwangoku kunye nobungqina kwigumbi ababekwa kulo. Nangona kukho abo banobuganga bokujikeleza itafile yegumbi lokutyela ngokukodwa nezitulo zePanton, kuqhelekile ukuzidibanisa nezinye iintlobo zezitulo, ngakumbi ukuba ufuna ukufumana ubushushu. Siyabathanda mhlophe ngokudibeneyo neglasi okanye iitafile zomthi ezikhanyayo
Isihlalo seCesca, esenziwe nguMarcel Breuer ngo-1928 saze sahlelwa nguKnoll, sibonisa isakhelo se-tubular yentsimbi kunye Umnatha osontiweyo emva kunye nesihlalo, eqhelekileyo yobugcisa bemveli. Umdibaniso wotshintsho ngexesha lawo ubunyani bawo obungenakuphikwa.
Ukuba njengabo ifenitshala enemingxuma umkhwaUkubandakanya izitulo zohlobo lweCesca kwigumbi lokutyela akunakubonakala ngathi ngumbono ophumelele ngakumbi. Siyayithanda inguqulelo yesiko elidityaniswe neglasi okanye iitafile zokhuni zerustic. Kodwa nabo banezakhelo ezimnyama ngenxa yomahluko onomdla owenziweyo xa zibekwe zijikeleze itafile yeplanga kwiithoni ezikhanyayo.
Zeziphi kwezi ntlobo zezihlalo onokukhetha kwigumbi lakho lokutyela?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ifenitshala » Iindidi ezahlukeneyo zezitulo zegumbi lakho lokutyela
Ukutya okunokutyiwa kukutya okuchasayo